အပြာရောင် Tint / အပြာရောင်ဗဓေလသစ် Galvalume သံမဏိစာရွက်ကွိုင် (G350 / G450 / G550) - Jiang Lin သံမဏိကော်ပိုရေးရှင်း
အထူ: 0.2 - 1.2 မီလီမီတာ
အကျယ်: 900 - 1250 မီလီမီတာ
အတွင်းအချင်း: 508 - 610 မီလီမီတာ
အပြင်ဘက်အချင်း:1100 - 2100 မီလီမီတာ
ကွိုင်အလေးချိန်: ≤ 10 တီ
အမျိုးအစားများ: အားလုံး, သွပ်ရည်စိမ်ထုတ်ကုန် အမှတ်အသားများ (Tags): အင်ဒိုနီးရှား, ထိုင်းနိုင်ငံ
G550 Galvalume / Aluzinc သံမဏိကွိုင် / စာရွက်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ(GL)
ပါဝင်ပါသည် :လူမီနီယံ ( 55% အလေးချိန်ရှိသည်), သွပ် ( 43.4% အလေးချိန်ရှိသည် ), နှင့်ဆီလီကွန် ( 1.6% အလေးချိန်ရှိသည် ).
သွပ်ငွေစက္ကူ, GI နှင့် GL ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အဓိကကုန်ကြမ်း. Jianglin သွပ် billet သည် galvanizing စက်မှုလုပ်ငန်းများအကြားစျေးကွက်ဝေစုမြင့်မားပြီးကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုအားသာချက်များရှိသည်.
သတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုသည် 180,000 တန်ချိန်
လှိမ့်နည်းပညာ၏အလျင် 130 m / min
အထူ 0.2 - 1.2 မီလီမီတာ
အကျယ် 900 - 1250 မီလီမီတာ
အတွင်းအချင်း 508 - 610 မီလီမီတာ
အပြင်ဘက်အချင်း 1100 - 2100 မီလီမီတာ
ကွိုင်အလေးချိန် ≤ 10 တီ
ချေးသည် - အလူမီနီယမ်သည်အလွန်ထူသော alumina အလွှာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
အပူခုခံ - ခံနိုင်ရည် 300 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်↑
အပူရောင်ပြန်မှု - အပူရောင်ပြန်ဟပ်မှုသည်သံမဏိထက်နှစ်ဆမြင့်သည်
စီးပွားရေး - Al-Zn သံမဏိပြားများ၏thanရိယာသည်ပိုမိုများပြားသည် 3% တူညီသောအလေးချိန်နှင့်တူညီသောရွှေအဖုံး၏အတူတူပင်သံမဏိပြားထက်ပိုကြီးသည်.
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း: ခေါင်မိုး, မြို့ရိုး, ကားဂိုဒေါင်, soundproof နံရံ, ပိုက်နှင့်ပေါင်းစပ်အိမ်သူအိမ်သား, စသည်တို့.
မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်း: မာဖလာ, အိပ်ဇောပိုက်, Wiper ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, လောင်စာဆီတိုင်ကီ, ထရပ်ကားသေတ္တာ, စသည်တို့.
အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ: ရေခဲသေတ္တာ backplane, ဓာတ်ငွေ့မီးဖို, လေအေးပေးစက်, အီလက်ထရောနစ်မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖို, LCD ဘောင်, CR ပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားခါးပတ်, နောက်ခံအရင်းအမြစ်ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်, လျှပ်စစ်ဓာတ်ငွေ့ကက်ဘိနက်, စသည်တို့.
စိုက်ပျိုးရေး: ဝက်အိမ်, ကြက်သားအိမ်, စပါးကျီ, ဖန်လုံအိမ်ပိုက်, စသည်တို့.
အခြား: ကျိုးအပူလျှပ်ကာအဖုံး, အပူလဲလှယ်, ခြောက်သွေ့, အပူချိန်, စသည်တို့.
Steel Sheet/ Protection ကိုကာကွယ်ပါ
- ပုံမှန်အားဖြင့်, ကွိုင်တစ်ခုအတွက် MOQ 1 မင်းရဲ့.
- ဖောက်သည်အသစ်များအတွက်: 30%ပစ္စည်းမပို့မီ T/T deposit 70%T/T - မိတ်ဖက်များနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူများအတွက်, 30%T/T သိုက် 70% T/T သည် B/L Copy ကိုဆန့်ကျင်သည်.
- ကျွန်ုပ်တို့ USD ကိုလက်ခံသည်, EUR နှင့် RMB.
- 5-10 စတော့ရှယ်ယာအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ရက်အနည်းငယ်ကြိုတင်ရသည်.
- ပုံမှန်အားဖြင့်, ကျွန်ုပ်တို့၏တင်သောဆိပ်ကမ်းများမှာ Tianjin ဖြစ်သည်, နှင့်ရှန်ဒေါင်း. သို့မဟုတ် ၀ ယ်သူသည်တရုတ်နိုင်ငံရှိမည်သည့်ဆိပ်ကမ်းကိုမဆိုသတ်မှတ်နိုင်သည်.
- ဟုတ်တယ်, ကျွန်ုပ်တို့၏စတော့ရှယ်ယာအခြေအနေပေါ်မူတည်, ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအခမဲ့နမူနာများပို့လိမ့်မည်. အမြန်ကြေးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကပေးဆောင်ရမည်.
အလယ်တန်း PPGI / PPGL
အင်ဒိုနီးရှားဈေးကွက်အတွက် Galvalume သံမဏိပြားများကိုကြိုတင်ဆေးသုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်
ပူပြင်း galvanized စာရွက် / ပြား (GI စာရွက်)